Enterprise Ongororo Platform ine Social Kubatanidzwa: Bvisa
Muvhuro, July 2, 2012 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Vatengi vepamhepo vanosarudza kuita bhizinesi nevatengesi vavanovimba, uye kugadzirisa mukurumbira wezita kunofanirwa kuve iko kwekutanga kutarisa kune ese emakambani ekutaurirana chirongwa.
Kuongorora kwevatengi inzira yakajairika uye yakaedzwa-nguva yekuvaka kuvimbika kwechiratidzo. Aya ongororo anofanirwa kuratidza chokwadi uye chechokwadi chiitiko chemutengi akatenga uye kuyedza chigadzirwa kana sevhisi. Asi iyo yemamirioni-emadhora mubvunzo ndeyekuti ungawana sei tarisiro yekutenda kuti muongorori ndiye mutengi achipa ongororo yechokwadi, uye kwete mushambadzi mukuvharidzira doling kubuda propaganda?
Zvimwe zvinongedzo zvinosanganisira:
Ipa ruzivo nezve iye anoongorora. Kunyangwe zvingave zvisingaite kupa yakadzama info yekufona, iro guta rekuongorora uye nyika, pamwe nezuva rekutenga, zvinogona kusimbisa iyo ongororo
Shandisa simba rezvenhau. Mafungiro eshamwari, kana kunyangwe nyanzvi dzisingazivikanwe zvine basa.
Ipa ruzivo kumatarisiro anogona kuvabatsira kutsigira kuongorora - zvidzidzo zvemakesi, zvinyorwa zvehunyanzvi, mapepa machena nezvimwe.
Simbisa yakanakisa ongororo uye nekutsvagurudza kwakabatana pane ako enhau midhiya, uye kuapururudza nhaurirano, sarudzo dzemafungiro uye kugadzirisa.
Vatengesi vanogona zvakare kushandisa maturusi senge Bvisa Ongororo, bhizinesi rezvemagariro-rakabatanidzwa ongororo chikuva kutyaira kubatanidzwa mune izvi maitiro.
Ongorora kuongorora papuratifomu inoratidza vatengi vakanaka uye inotsvaga mhinduro yavo, ichivapa sarudzo dzekuisa mafoto nemavhidhiyo zvakare. Chikuva chacho chinobva changoburitsa wongororo kune chiteshi chakasarudzika, uye chinobvumidza nhengo dzenharaunda kutumira mhinduro, nekudaro kukamba kutanga nhaurirano yekudyidzana iyo inogona kupa zvakatowanda kunzwisisa kune tarisiro. Mushambadzi anochengetedza zvine mwero kugona kuona kuti zvese zvinoramba zviri mukutonga. Muongorori zvakare anowana sarudzo yekugovana ongororo paFacebook, Twitter uye LinkedIn.
Nekudaro, iwo mubvunzo wekuvimbika kwekudzokorora unosara. Bvisa Vimba Mafirita, chishandiso chakajeka, chinogona kubatsira neizvozvo. Trust Mafirita anotendera iyo tarisiro yekutarisa iyo ongororo kuti ione chete ongororo dzakatumirwa nezvivakwa zvavanovimba nazvo, senge avo Facebook shamwari, kana nyanzvi dzavanoremekedza. Kune vashambadziri, Pluck inopa yakazara yakazara mibairo sisitimu iyo inovabatsira kuziva uye kubatisisa ongororo kubva kune vechigadzirwa nyanzvi uye nedzimwe nhengo dzine mukurumbira idzo nharaunda yepamhepo ingangodaro kuvimba.
Vatengesi vanogona kushandisa Pluck wongororo yezvinangwa zvakakura kupfuura kungova chishandiso kuburitsa ongororo dzinovimbika. Semuenzaniso, kubatanidza Pluck Ongororo kune peji yechigadzirwa muwebhusaiti, kana kunyangwe kune imwe saiti diki, inobatsira kusimudzira masosi enjini yekutsvaga.
Tags: kuongorora kwevatengibvisakuongorora chikuva
Dhiraivha Engagement nemaWidgets kubva kuWidgetbox